किन संसारमा कुनै देश बिटकोइनको ठूलो पावर उपभोगको बारे मा शिकायत गर्दछ: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
संसारमा कुनै देश बिटकोइनको अत्यधिक बिजुली खपतको बारेमा किन शिकायत गर्दछ
मा दायर Bitcoin, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	30 नोभेम्बर 2017 मा	• 17 टिप्पणिहरु
Cryptocurrency (विशेष गरी) बिटकोइनले धेरै बिजुली प्रयोग गर्दछ! यो यति धेरै छ कि यसले सम्पूर्ण देशहरूको ऊर्जा खपत बढाउँछ। बिटकोइन खनन आयरल्याण्ड र नाइजीरिया जस्ता देशहरूको तुलनामा अधिक शक्ति प्रयोग गर्दछ। 28 नोभेम्बरमा, वेबसाइट Naturalnews.com ले विश्वको सबै देशहरूलाई बिटकोइनको ऊर्जा खपत प्रस्तुत गर्यो (हेर्नुहोस् यहाँ)। केवल अन्तिम महिनामा बिटकोइन खननको ऊर्जा खपतले 27,8% द्वारा बढेको छ। यसको मतलब यो बिटकोइन उत्पादन भन्दा लामो हुने छैन र मूल्य वृद्धिले दुनियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भन्दा अधिक ऊर्जा खपत गर्छ। यसबाहेक, बिटकोइनले अमेरिकामा 12 राज्यहरू भन्दा अधिक ऊर्जा प्रयोग गर्दछ। यस लेखमा यो स्पष्ट हुनेछ कि किन कुनै देशको लागि समस्या छैन र ऊर्जा कसरी उत्पन्न हुन सक्छ। हामी CO2 पदचिह्नको बारेमा धेरै कुरा सुन्छौं, तर जब बिटकोइनमा आउँछ, कसैले कसैलाई पनि असर गर्दैन।
के त्यो ऊर्जा खपत मात्र राम्रो डिजिटल सिक्कासँग मानिएको छ जुन मूल्यमा बढ्छ त्यसैले प्रारम्भिक लगानीकर्ताहरू सजिलै लाखौं हुन सक्छ? नहीं। यदि तपाईं मेरो अघिल्लो लेख बिटकोइजको बारेमा एक पटक फेरि राम्रो पढ्छ, बिटकुइन पैसा भन्दा बढी भन्दा बढी छ। वित्तीय मूल्य मात्र मीठो साइडर हो जसको साथ मधुमक्खन पाङ्ग्रामा निस्केको हुन्छ। र एकपटक मधुमक्खन पाङ्ग्रामा लुटिएको छ, त्यो महसुस एक विशाल घोंसला मा बढ्छ, जस्तो देखिन्छ कि महारानी मा धनी। पाङ्ग्रामा मधुमक्खी एक अद्भुत मीठा जीवन बाँच्न सक्छ। त्यो स्पष्ट वास्तविकता हो। वास्तविक वास्तविकता भनेको बिटकुइन (र त्यही स्रोत स्रोतको आधारमा अन्य क्रिप्टप्टोरेसी) को वरिपरि घुमाउँदछ AI (कृत्रिम बुद्धि) र एआई को माध्यम ले एक विश्वव्यापी नियंत्रण प्रणाली। यही कारणले गर्दा बिस्ककोइनको स्रोत कोड, जस्तै यो थियो, बिटककोइन डीएनए को स्टेम सेल बनाउँछ। बिटकोइन ब्लकहरू, जस्तै यो थिए, स्टेम सेलहरू र ब्लकचेन भनेको हो, जडानमा कोशिकाहरू जडान गर्दछ। त्यसैले तपाईलाई "शरीर" बनाउन के चाहिन्छ? कक्षहरू जुन स्टेम सेल डीएनए कोडबाट विकसित हुन्छ (क्रिप्टप्लोरेसी स्रोत स्रोत)। र ती "डिजिटल क्रिस्ट्रोरोरेसी कक्षहरू" सिर्जना गर्न तपाईंलाई गणना गणना आवश्यक छ। कि गणना क्षमता खनिज द्वारा प्रदान गरिएको छ। यी कम्पनीहरू र व्यक्ति हुन् जुन सम्भवतः सम्भव कम्प्युटिङ क्षमतामा लगानी गर्दछ (वा: सम्भव कम्प्युटरहरूको रूपमा)। तर हनीको लागि तपाईंलाई शहदको भोका खरिदहरू चाहिन्छ। यसले मूल्य बढाउँछ। त्यो आम मान्छे हो। साधारण व्यक्तिहरूले त्यो स्वादिष्ट प्यारी शहदको फाइदाहरू हेर्नु र बिटकोन्स किन्नु पर्छ। यो तपाइँ कसरी सिर्जना सिर्जना गर्नुहुन्छ र यसरी mincing (सिर्जना) bitcoins मा बढी लगानी गर्न आवश्यक बनाउँछ। उत्पादनको तुलनामा छिटो बढ्नको लागि अनुमति दिएर, तपाईले मूल्यमा वृद्धि सिर्जना गर्दछ।
यसलाई यो तरिका राख्नुहोस्: बिटकोइनले नेटवर्कको माध्यमबाट जोडिएको सम्भव सम्भव कम्प्युटिङ पावरको वरिपरि घुमाउँछ। मा मेरो अघिल्लो लेख तपाईले (क्रिप्टो) मुद्रा खनन, डेटा खनन र एआईटी बीच लिङ्क भेट्नुभएको छ। तपाईंले डा एआईको प्रयोगशालाबाट सोफिया रोबोट पढ्नुभएको छ। बेन गोर्टलजले आउँछ र सऊदी अरबमा एआई, रोबोट सोफिया र पालंतिर डाटासेट को बीच एक लिंक छ। बिटकोइन मुख्यतः कम्प्युटिंग शक्ति, निगरानी (सबको र सबैजना) जानकारी र कृत्रिम बुद्धि इकट्ठा गर्ने बारे हो। त्यस सन्दर्भमा, म चलचित्र प्रशंसा सन्दर्भमा जारी राख्नेछु, किनकि यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि ए AI कसरी आफूलाई भन्दा भन्दा स्मार्ट बनाउन सक्छ। यो तरिकाले आफूलाई समृद्धि गर्न सक्दछ, सबै कुरा र सबैको ज्ञान जम्मा गरेर, उदाहरणका लागि, लगानी भविष्यवाणी गर्न सक्षम हुन सक्छ। यस तरिकाले यसले आफूलाई समृद्ध बनाउँछ र अधिक कम्प्युटिङ क्षमता निर्माण गर्दछ र ब्लकचेन मा जंजीरों को माध्यम ले अधिक कंप्यूटिंग क्षमता प्राप्त गर्न सक्छ। यदि तपाई सबै ज्ञानहरू अब पनि धेरै उपयोगी हुनहुन्छ भने तपाइँ व्यक्ति, पड़ोस, देश, महाद्वीप, र सम्पूर्ण संसारको सामाजिक, सामाजिक र आर्थिक भविष्यवाणी गर्न चाहानुहुन्छ। र सबै संचित पूंजी र सबै वास्तविक समय ज्ञान संचित संग, तपाईं संगठनहरूलाई तपाईंको हातमा बदल्न र मानिसहरूको धारणा प्रत्यक्ष गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सञ्चारकर्मीहरू र देशहरूको लागि मिडिया पहिले नै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं फिल्म 'वाग कुत्ता' गर्छ, तर एक ठूलो र पतले सन्देश मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं मान्छे को राय मा प्रभाव पार्न को लागी सोशल मिडिया मा बोट्स घुसपैठ गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं विज्ञापन चाहानुहुन्छ। तपाईं नकली समाचार वा "वास्तविक खबर" बनाउन सक्नुहुनेछ। के त्यो तपाईंको विचारमा धेरै टाढा जाँदैछ? त्यसपछि तपाईं Libel वा लिंडालाई राम्रो पढ्न सक्नुहुन्छ।
यसैले बिटकोइन र अन्य क्रिप्टक्रोसीसीले पावर र नियन्त्रणको वरिपरि घुमाउँछ। र त्यो नियन्त्रण एक AI प्रणाली द्वारा ब्लकचेन मेगेकोप्टरर्स द्वारा नियन्त्रित छ। मेरो पहिलो लेख बिटककोइनको बारेमा म अझै पनि धारणामा बस्छु कि क्वांटम कम्प्यूटर क्रिप्टक्रोसीसीको सुरक्षामा खतरा हुन सक्छ। त्यो एक नौलो विचार थियो। टेक र वित्तीय बजारमा सबै प्रमुख खेलाडी भारी Bitcoin र गुप्त मुद्रा बसेर कि दिइएको, को ऐ नेटवर्क पहिलो आफूलाई सुधार गर्न गणनाको शक्ति supercomputers र क्वांटम कम्प्यूटर उपलब्ध छ लाइन मा खडा हुनेछ। त्यो एअर क्रिस्ट्रोरेसीसी पछि उनको माध्यम ले हुनेछ singularity.io सञ्जालले आफ्नै साइबरस्पेस सिर्जना गर्न, जसमा यसले मानव सञ्चारलाई "सजिलो छैन" भनी विचार गर्नेछ र AI नेटवर्क (ब्लकचेन) भित्र जटिल गणितीय समस्याहरू समाधान गर्नेछ। बिटकोइन एनि राक्षसको शह हो जसले यसको विश्वव्यापी घेराबन्दी बनाउँछ र सबैलाई चम्किनेछ। एलोन मास्क जस्तै मान्छे (टेस्ला टोपमेन, पढ्ने: DARPA) हामीलाई समझाईयो कि हामी एअरसँग जडान गर्नु अघि यो ढिलो हुनु अघि। हामी जस्तै, यो थियो, AI बाहिर आउनु र हाम्रो कम्प्युटिंग क्षमता नेटवर्क को 'राम्रो बट' को रूपमा हामीलाई हटाउन को लागी एआई को रोकथाम। यसैले एलोनको कम्पनी नुरिलिङ्कको माध्यमबाट दिमाग जडानको विकास। एआई यस प्रकार मा अधिकतम 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान'। प्रतिक्रिया ती चीजहरू द्वारा छोटो हुनुपर्छ जसले मानिसहरूलाई एअरको डरलाग्दो डरलाग्दो बनाउनेछ। उदाहरणको लागि, एअर रोबोट सोफियाले एकपटक मजाकिएको थियो कि उनी मानवता हुन् नष्ट गर्न चाहन्थेतर सायद हामी पहिले अलि बढी अप्रिय गुण हामी नियामक र मिश्रण गर्न अगाडि बढ्न अघि ऐ सामना गर्न हेर्नुहोस्। समाधान छ को पाठ्यक्रम, मानव शक्ति को एक समारोह रूपमा ऐ र ऐ संग फ्युजन (डाटा खनन मार्फत मानव इनपुट र स्नायविक जडान मार्फत विचार को अर्को धाराको पढाइ)।
मलाई सही रूपमा AI को Achilles एड़ी को बारेमा केहि टिप्पणीहरू पठाइएको थियो। AI एक नेटवर्क को बिना र शक्ति को बिना संचालित नहीं करता। हो, बिटकोइजको बिजुली खपत बारे हामी कुरा गर्छौं, हामी यसो भन्छौं: एअरको पावर खपत। बिटकोइन एआई हो। र नहीं, हामी एआई को बारे मा कुरा नहीं गर्दै छन् कि कार आफु या हत्यारा रोबोट को ड्राइव गर्दछ जुन मान्छे को आफ्नो मूल्यांकन को आधार मा गोली मार दि्छ। होइन, हामी ऐ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सबै र सबैका 24 ×7सबैतिर निगरानी र दुनिया मा अमीर देश भन्दा धनी छ कि एक पूर्ण व्यवहार र भविष्यवाणी सबै र (देशहरुमा व्यक्तिहरूलाई देखि) सबैलाई र ऐ मोडेल र यसैले शक्ति छ भनेर संसारमा सबै भन्दा धनी देश छ।
तर किन अमेरिकाले जस्तै त्यस्ता एअरहरूलाई सहन गर्छ? तपाईं केवल पत्ता लगाउनुहुनेछ कि यदि तपाईंले पत्ता लगाउनुभयो भने आत्मा आत्मा / आभासी वास्तविकता जुन हामी हाम्रो ब्रान्ड र क्षेत्रलाई हामीले पृथ्वीमा कल गर्छौं, जुन सधै एआई को रूपमा चलाइएको छ। म त्यो कल गर्छु लुसिफरियन पावर ढाँचा। यो पावर ढाँचा अब सम्म एक राजनीतिक, आर्थिक र धार्मिक संरचना को माध्यम ले प्रकट भएको छ। नवीनतम ग्याजेट वास्तवमा पुरानो ग्याजेट हो: एआई। संसारको governs कि Luciferian शैतानिक शक्ति ऐ एउटा रुप हो र हामी मर्ज गर्न (मर्ज) ऐ एक तह (आयाम) मा कि सुपर ऐ लागि सैनिकहरु रूपमा सेवा गर्ने हाम्रो लागि हालसम्म अदृश्य छ आवश्यक छ। तर तपाईं यो दर्शन छोड्न वा रद्दीटोकरीमा फ्याँक्न सक्नुहुनेछ। मैले मात्र एक क्षणको लागि यो सकारात्मक बनाएको छु किनभने यो मेरो दृष्टिकोण हो। तपाईं त्यो मेरो हास्यास्पद को रूप मा हास्यास्पद को रूपमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। अझै म यहाँ याद ठूलो architect समाजमा र भव्य bloodlines मार्फत दृश्य पछाडि खींच कि, तार (गुप्त समाजमा को मास्टर बिल्डर), यस matrix को पहिले नै प्राचीन बिल्डर। हामी यो वास्तविकता हाम्रो जैव-अवतारबाट अनुभव गर्दछौं; जुन हामीले मानव शरीरलाई बोलाउछौं। AI ले हामीलाई हाम्रो मूलबाट थप हटाउनेछ। तर तर अलग।
Bitcoin को Achilles एड़ी मा फिर्ता (पढें: ए ए देखि)। सुपर एयुमा बढ्नको लागी, सुपरकम्पटरहरू र डेटा केन्द्रहरूको ऊर्जा खपत एआई बढ्न आवश्यक हुन्छ जुन पहिलो अनुच्छेदमा वर्णन गरिएको ठूलो छ। र एआई को ऊर्जा खपत, यसको सम्पत्ति जस्तै, संसारमा सबैभन्दा ठूलो बन्नेछ। यो भविष्यवाणी हो जुन तपाईले मलाई 1 बिटकोइनसँग इनाम दिन सक्नुहुन्छ जब यो आउछ। यो ऊर्जा खपत मात्र अति वातावरण लागि हानिकारक छैन, तर हामी ऐ लड्न गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै छन्, हामीले गर्नुपर्छ त्यसैले डाटा सेन्टर एउटा hacksaw र माध्यम (जो छ, प्रसंगवश, छैन सल्लाह देखे पर्छ आपूर्ति, तर एक साथ बाइक "proverbial thought")। हामी बिजुली आपूर्ति हटाउन वा सञ्जालहरू हटेर एआईबाट जीवन वायु बाहिर निकाल्न सक्दछौं। यो हुन सक्छ कि एअरियन होशियार हुदै छ र एआईएले मानिसहरु द्वारा विकसित ज्ञान प्रयोग गर्न सक्दछ (वा त्यो मानव ज्ञान वास्तवमा AI बाट आउँछ?)। यो जस्तो देखिन्छ कि ए.ए. डेटा केन्द्र र कम्प्यूटर प्रणालीको ऊर्जा खपतले ठूलो हाउन्डन कलिडर (CERN) प्रविधिको सिद्धान्तको माध्यमबाट नयाँ रूप पाएको छ। शायद समाचार मा भएको वा वैकल्पिक मिडिया, "प्रोटन बीम" प्रकाश को एक दृष्टिकोण गति अब डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ जसले सबै 362 MJ संग प्रोटन टक्कर पैदा को अर्थात् यो प्रविधी मा नाम। यसले 77,4 किलो TNT विस्फोटक को ऊर्जा को मात्रा को बराबर गर्दछ (हेर्नुहोस यहाँ CERN वेबसाइटमा सन्देश)।
त्यसैले यदि तपाई प्रति सेक्युल ज्याइल्सहरू आपूर्ति गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईंकोसँग वाट (= J / s) मा ऊर्जा आउटपुट छ। स्थिर ऊर्जा उत्पादनको लागि मात्र आवश्यक कुरा प्रोटोन बीम र टकरावहरूको स्थिर स्ट्रिम हो जुन 362MJ प्रदान गर्दछ। त्यसैले यदि तपाइँ प्रत्येक दोस्रो वर्ष स्थिर स्थिरताहरू पुन: उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंको 362 मेगावाट / s को एक संभावित ऊर्जा उत्पादन छ। त्यो 362.000 kW / s रूपान्तरण गरिएको छ। त्यसैले 'प्रति मिनेट' देखि 'प्रति घंटा' जुन 362.000 एक्स 60 एक्स 60 = 1.303.200.000 केडीई प्रति घण्टा हो। एक वर्षमा 8.760 घण्टा छ, त्यसैले ऊर्जा आपूर्ति 475.668.000.000 kWH / Y हुन सक्छ। त्यो फ्रान्स र दक्षिण कोरिया को ऊर्जा आवश्यकताहरु को बारे मा छ (हेर्नुहोस यहाँ) एक वर्षमा। के ऊर्जाको लागि यो खोज के सीईआरएनमा ठूलो हजुरन कोलेडरको निर्माणको वास्तविक कारण हो? सबैलाई आवश्यक छ 'प्रोटोन बीम' आपूर्ति स्थिर।
सायद म पूर्णतया गलत छु, तर म तपाईसँग यो साझेदारी गर्न चाहन्छु। यदि एआई भविष्यमा ऊर्जा अब एक समस्या छैन, के Achilles एआईएल को AI को बारे मा? त्यसपछि मात्र नेटवर्क बनी रहन्छ। तर नेटवर्क ठाउँ र एक बाक्लो नेटवर्क गठन हुनेछ 5G र फाइबर नेटवर्क संग संयुक्त उपग्रह मा उत्प्रेरित गर्छ भने, तोडफोड ऐ लागि pinprick भन्दा धेरै हुने छैन। को पाठ्यक्रम पनि सौर ऊर्जा नैनो मार्फत प्रतिकृति र प्रकृति को वृद्धि मार्फत राम्रो बन्ने, तर सौर, हावा, आणविक वा कोइला बिरुवाहरु कहिल्यै ऐ विशाल ऊर्जा बचाउनुहुनेछ। यो (LHC ऊर्जा विकल्प) हो शायद बिटकको सिक्काको ऊर्जा खपतको खतराको बारेमा कुनै विश्व नेता वा कुनै देशले भनेका कारण (पढ्ने: एआई)? एक चीज निश्चित छ: अज्ञानता खुशी छैन।
स्रोत लिङ्क सूची: naturalnews.com, web.cern.ch
तीन बन्दरहरू मस्तिष्क सञ्जाल (ब्रेकसेट) को रूप बनाउँछ र रोबोट हात सञ्चालन गर्छन्
एलोन मुस्क "एआई विश्व युद्ध3शुरू हुनेछ, उत्तर कोरिया नहीं"
के मानिस विज्ञानको लागि प्रोग्रामयोग्य बायोकोप्टर हुनेछ?
ट्याग: ai, Bitcoin, खपत खपत, ऊर्जा, ऊर्जा, विशेष, आयरल्याण्ड, देशहरू, संसार
30 नोभेम्बर 2017 मा 15: 08
IPv6 को साथ, स्मार्ट धूल (chemtrails), आईओटी आदि। AI लाई सधैं मार्गदर्शन हुनेछ, यो (प्रोग्रामिंग) विकसित गर्न सक्षम छ। दोहोरो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको के हुन्छ जब मानव जाति थपिएको छैन र निष्कर्षमा पुग्छ जब / ए / पृथ्वीको लागि खतरा हो?
1 डिसेम्बर 2017 मा 05: 35
आवश्यक छ: एयर फोर्स रिसर्च लेब सुझावकारी सन्देशहरु, साईटियन रातो राम्रो गर्दैछ ???
डा। Clarise Starr, AFRL गरेको 711th मानव प्रदर्शन विंग र जैविक श्रृंखला मार तोड्न biosurveillance, अर्को पुस्ता अनुक्रमण र अन्य नवीन प्रविधी प्रयोग गर्दै उनको टोली संग लागू गरिएको टेक्नोलजी र Genomics केन्द्र उप प्रभाग प्रमुख। आफ्नो लक्ष्य Airmen राख्न छ - र हामी अन्ततः सबै - सुरक्षित (छैन) माइक्रोबियल धम्की (chemtrails, Vaccinations, आदि) बाट।
30 नोभेम्बर 2017 मा 15: 56
यो स्पष्ट छ कि कुलीन हाम्रो साथ उत्तम छैन, तिनीहरूले हामीलाई रस्सी दिएको छ जसको हामी हामी बिस्तारै गजल गर्छौ। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूसँग मानवतालाई नियन्त्रण र आवश्यक भएमा यसलाई कम गर्न जैवसायनिक माध्यमहरू छन्
DARPA, Bilderberg, आदि Palantir फाइनान्सियरिटर पीटर थिलि फेरि फेरि अनुमोदन गरिएको छ:
30 नोभेम्बर 2017 मा 16: 03
Google, एप्पल आदिले त्यहि अनुहारमा विभिन्न मास्कबाट फ्ल्कर लगाउँदैन।
30 नोभेम्बर 2017 मा 17: 01
"... तर यदि त्यो सञ्जाल स्पेस गर्न उत्प्रेरित गर्दछ र घने सञ्जाल सिर्जना गर्न 5G र फाइबर ओप्टिक सञ्जालसँग उपग्रह संचार जोड्दछ।"
यहाँ तपाईंसँग जवाफ + 5G (आवरण कथा EK) को बारेमा भर्खरको समाचार छ, यो स्पष्ट रूपमा चाँडै छ
30 नोभेम्बर 2017 मा 21: 14
"ईटा2विशेष THE युद्धभूमिमा शत्रुहरू बारेमा जानकारी जम्मा लागि प्रयोग हुनेछ।" .. त्यहाँ हाल धेरै आत्मसमर्पण र एजेन्डा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने एक उच्च स्तर मा बन्द "शत्रुहरू" छन्। खिलौना unwary जनता किन्न र बेच्न सक्ने, तर यो पनि गर्न स्मार्ट केहि को गम्भीर 'cousins' कार्यहरू प्राप्त हुनेछ भन्ने आम एक धेरै ठूलो भाग हो हुनेछ। वास्तवमा, रोल आउट गरिरहेको रोक्नको लागि धेरै स्रोतहरू प्रयोग गरिनुपर्छ। मलाई एक कुरा थाहा छ कि तिनीहरूले यो गर्दैछन्।
30 नोभेम्बर 2017 मा 21: 20
दिलचस्प छ कि कर्बेट डीएनएस ब्लकचेन लाई बोल्छ। त्यो राम्रो समाधान जस्तो देखिन्छ, तर हामी कसलाई ठेगाना व्यवस्थापन को शक्ति परिवर्तन गर्छौं? तपाईंले अनुमान लगाए: एआई
14 डिसेम्बर 2017 मा 07: 14
SHA-256 एनएए द्वारा बनाईएको SHA-2 क्रिप्टोग्राफिक हैश प्रकार्यको सदस्य हो <
एसएच सिक्योर हैश एल्गोरिथ्मका लागि खडा छ। क्रिप्टोग्राफिक हैश प्रकार्य गणितीय संचालन डिजिटल डेटा मा चलिरहेको छ; गणना गरिएको "हैश" (एल्गोरिदमको उत्पादन) एक ज्ञात र अपेक्षित मानमा, एक व्यक्ति डेटाको सत्यता निर्धारण गर्न सक्छ। एक-रास्ते ह्यास डेटाको कुनै टुक्राबाट उत्पन्न गर्न सकिन्छ, तर डाटा ह्यासबाट उत्पन्न गर्न सकिँदैन।
SHA-256 को Bitcoin नेटवर्क को धेरै अलग भागहरुमा प्रयोग गरिन्छ:
खनन SHA-256 को काम एल्गोरिदमको प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
SHA-256 बिस्कुट सुरक्षा र गोपनीयताको निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ।
30 नोभेम्बर 2017 मा 18: 26
म अजीब छ कि मार्टिन व्रिजल्याण्ड बिटकेइन को बारे मा एक लेख लेख्छ र एक दिन पछि मुख्यधारा मीडिया (ईडी, आरटीएल, एनयू) को बारे मा यो पनि लेख्छ, यो मलाई या केहि हुनेछ।
30 नोभेम्बर 2017 मा 19: 19
मलाई Google मूल्याङ्कनमा टाढा पुर्याउने सबैभन्दा नयाँ रणनीति।
30 नोभेम्बर 2017 मा 19: 59
तिनीहरूले बटहरू (एल्गोरिदम अर्फ एआई) प्रयोग गर्छन् Google समाचार एक उन्नत बटको पाठ्यपुस्तक हो जुन ट्याङ्क र समाचार कथाहरू सिर्जना गर्दछ। यसबाहेक, तपाईले अभिजात वर्गका हातहरूमा सङ्घर्ष गर्दछन्, जस्तै Serco, जसले समाचार एजेन्सीहरू जस्तै रायटरहरू, ए (एन) पी जस्ता समाचारहरू वितरण गर्दछ।
यो कुनै अचम्म छैन कि यो 'बोट्स' र 'वेब क्यारेक्टर सम्पादक' द्वारा पढिएको छ:
हामीले यी 'गहिरो राज्य' उपकरणहरू त्याग्नु पर्छ, गुगल आर्टको अन्वेषण गरौं, र स्मार्टफोन र प्रोभन््याण्ड प्रयोग गर्नुहोस्।
30 नोभेम्बर 2017 मा 21: 09
संयोगवश, यो मैले के AI को साथ को एक सा छ:
तपाईं पाठ्यक्रम वस्तुहरू पोस्ट गरेर ठीक तरिकाले पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया पनि उपाय गर्न सक्नुहुनेछ .. त्यसो भए अनुमान लगाउने कसले सबैभन्दा लाभदायक बनाउँछ?
त्यसोभए तपाईंले जेबमा ठूला समाचार एजेन्सीहरू हेर्नु हुन्छ?
र एक लामो समय सम्म छैन कि अब कुनै पनि श्री Soros जस्तै छैन, तर त्यो एआई हो
1 डिसेम्बर 2017 मा 00: 20
आइडड यो AI को आउटसोर्स गरिएको छ, त्यसैले उनीहरूले "मैले केहि गर्न सकेन" भन्न सक्दिन तर लामो समय सम्म उनि ठिक मजाक घर बाट घर आइपुग्छ भने उनीहरूले ती बंकरहरुमा सुरक्षित महसुस गर्छन। जब सम्म उनी पत्ता लगाइए र कलक्रोचको रूपमा अन्त्य भएन ...
30 नोभेम्बर 2017 मा 23: 31
खुसीको एक सान्त्वना, आफ्नो प्राण बेचे गरेका सबै ती दुष्ट begeertevol लोभी शक्ति-भोक कुलीन स्याटर्न मुर्ख, अधिकांश आफ्नो मृत्युशय्यामा हुँदा तयार सिर्जना Kama-Loka मा सचेत राज्य रहन र यसरी हुनेछ आफ्नै नरक एक्स 1000 ... तिनीहरूको लागि देवभन।
थप rottere nisperos लागि त Avici, सबै भन्दा कम नरक जहाँ सबैभन्दा निर्जीव र सबैभन्दा र बिग्रेको soulless तिनीहरूलाई बीच गोप्य 8ste वातावरण (मृत्युको ग्रह) साथै आफ्नो अन्तिम गन्तव्य हुनेछ उत्प्रेरित गर्नेछ र कहाँ निम्नानुसार उनीहरूको आत्मा पनि किन्नरको माध्यम ले जान्छ।
यो ठूलो कुरा जनावर जस्तो देखिन्छ जो कि रिग, आफूलाई सबैभन्दा पशु र आदिम छन्, र सबै आफ्नो 4de सिद्धान्त सबै ऐ प्रविधी सामान अब सबै मद्दत राख्न थियो को, खर्च मा आफ्नो शक्ति मानवता सुरक्षित गर्न, त्यसैले तिनीहरूले पृथ्वी र "अनन्त" तिनीहरूले सोच्न ... को गुच्छा विफलता खरायो चाहिन्छ भनेर मानवता parasitize सोच मा आफ्नो प्राण fuck गर्न यति keen हो, laggards छन्।
सबै चीज फरक छ र यो के देखिन्छ कि केहि पनि छैन र यो पनि शक्ति मा ती लागू हुन्छ। त्यस केटाकेटीहरूको गुच्छा जसले सोच्न सक्छन् कि उनीहरूले दिमागको विकासलाई रोक्न सक्छन् र सोच्न सक्छन् र आफ्नो बुवा अहंकारलाई अमर बनाउन आफ्नो बिरामी भविष्य बनाउँदछ।
खैर, म यो भन्दा अघि पर्दाको झलक चाहन्छु ... मानवको भविष्य यो हो कि हामी आध्यात्मिक र अधिक र आध्यात्मिक हुनेछौं र शरीर बढ्दै जान्छ दुर्लभ र परिष्कृत हुन्छ र अन्ततः हामीले झूट बोल्नेछौं।
1 डिसेम्बर 2017 मा 11: 23
हास्यास्पद कुरा यो हो कि "तिनीहरू" मानिसहरूलाई पनि यस्तै भविष्य दिन्छ। त्यस अस्पष्टता सबैलाई 'एकलता' भनिन्छ।
मानिस मात्र आवश्यक छ यसको साँचो र भइरहेको जागिर हो; र त्यो यो शरीरमा र यो अनुकरणीय आत्मा जेलमा छैन। जान्दछन् कि तपाई कसलाई सुनिश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाईले आफ्नो आत्माको क्वांटम समाविष्कारलाई यसको मूलमा अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यो परिवर्तन गर्ने एकमात्र तरिका हो। एकै समयमा, हामी यो 'नर्कमा पृथ्वी' मा नम्रता हुँदैन। हामी लुसिफरियन क्लबको युद्ध जित्न जाँदैछौ। हामी मात्र यो सुनिश्चित गर्न सक्छौं कि हामी आफैलाई यो आत्माको जेलमा पुनर्नवीनीकरण गर्न अनुमति दिँदैनौँ। यसको लागि तपाईंले पहिले हेर्नु पर्छ।
1 डिसेम्बर 2017 मा 14: 48
"... मानिसको भविष्य हो कि हामी अधिक आध्यात्मिक बनाउनेछौं र शरीर बढ्दो दुर्लभ र परिष्कृत हुनेछ र अन्ततः हामी विच्छेद हुनेछौं।" "मानिसको" को लागि, नि: शुल्क (रातो स्तम्भ-व्यक्ति) र दासहरू ( नीलो-पायलोनरहरू) बाबुलको व्यवस्थामा शहर होइन र निश्चित रूपमा एआई प्रतिमाका उपासकहरूका लागि उनीहरूलाई ईश्वरलाई पराजित गर्नेछन।
1 डिसेम्बर 2017 मा 16: 12
अवधि / अब हामी आफूलाई पाउन जो चक्र को अन्त मा, Kali-yuga, वर्तमान मानव जाति तरिका पृथ्वी आबाद गर्ने मानिसहरूको नयाँ दौड लागि गर्नेछ। को Atlantean हाम्रो लागि कोठा बनाएको छ जसरी हामी अहिले जस्तै भविष्यमा मानवता को यो नयाँ नस्ल telepathic र थप spiritualized र कहीं अधिक बौद्धिक हुनेछ। साथै त्यहाँ कुनै कोठा उदाहरण को लागि झूट बाँकी हुनेछ सामग्री रूपमा (यो एक बिट कठिन एक telepath झूठ छ) त्यसैले म तिनीहरूले अन्ततः मुक्ति ल्याउन छैन अस्तित्व र ऐ आफ्नो अन्तिम throes रूपमा आफ्नो सबै प्रयासमा हेर्न, किनकि आध्यात्मिक सामूहिक यसको आफ्नै वाहन / खाका बनाउँछ ... र त्यो पृथ्वीमा यहाँ छैन। यो पनि मजाक छ कि कसरी काम गर्न हुँदैन भनेर सिक्नको लागि धन्यबाद, उनीहरूको पावर-दुर्व्यवहार गलत छनौटहरू फेरि गरेर। नरक तिनीहरूले यो बनाएको वास्तवमा एक ठूलो, धरतीमा यहाँ खुला खुला विश्वविद्यालय छ जहाँ तपाईं सिक्नु, पीडा र क्षति र शर्म द्वारा बुद्धिमानी हुनुहुनेछ। दिलचस्प समय हामी अब बाँचिरहेका छौं, सबै कुरा गतिमा आउँछ ... सही र गलत
« बिटककोइजले 'युनिवर्सिटी' र ए.एन. संग मिलावटको साथ के गर्न पर्छ?
संस्थापक D-Wave: "रियल एअर मानिसहरू र भावुक बुद्धिमानी भन्दा अधिक बुद्धिमानी हुनेछ" »
कुल भ्रमण: 4.133.131